Valverde oo sheegay in xili ciyaareedkan muhiimada koowaad ay ka dhigan doonaan Champions League – Gool FM
Valverde oo sheegay in xili ciyaareedkan muhiimada koowaad ay ka dhigan doonaan Champions League
(Barcelona) 17 Sab 2018. Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa sheegay in uu jiro rabitaan xoogan ee ciyaartooydiisa ku aadan si ay ugu guuleystaan tartanka Champions League.
Ernesto Valverde ayaa tilmaamay in tartanka Champions League ay ka dhigan doonaan muhiimada koowaad xili ciyaareedkan.
Hadalka Ernesto Valverde ayaa yimid kadib markii uu kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay kula ciyaari doonaan garoonka Camp Nou kooxda reer Holand ee Eindhoven tartanka Champions League habeen dambe ee Talaadada.
“Waxaan ilaaway wixii dhacay, mana dareemayno cadaadis ama niyadjab, waxaan gali doonaa xili ciyaareed cusub, iyo rajo cusub, sidaa daraadeed waa inaan diirada saarnaa, sidaan awooda ku saari lahayn inaan ku bilaabano si adag”.
“Waxaan qabnaa rajo weyn ee ku aadan inaan ku guuleysano tartanka Champions League, laakiin tartanka ma ahan mid sahlan, sababtoo ah waxaa ka mid ah kooxo waaweyn, Waxa aan u baahanahay waa qaab ciyaareed xoogan, si aan ugu guuleysano koobka”.
Heegan oo Gacanteeda isaga reebtay Horseed isla markaana hiigsatay Hogaanka Horyaalka
HORDHAC: Liverpool v Paris Saint Germain